WAA MAXAY BAAHIDA INOO HAYSA KALADOORASHO 3 MUSHARAX? | hogaanka.org
Waxaa aynu maqalnaa waxaa soo socda doorasho,dad u sharaxan doorasho iyo arimo la xidhiidha sidaa darteed hadii aan is weydiino ugu horeen waa maxay doorasho?
Doorasho waa xulasho urur ama shaqsiyaad u xulanayaan xilqabasho ama xubin ka noqosho jago xileed.Xilkaasi wuxuu noqon karaa mid aan ku xidhney oo aan xidhiidh la lahayn siyaasad,ama mid salka ku haya siyaasad iwm. Doorasho waxay noqon kartaa mid dawladeed,mid hayadaha madax banana,kuwa gaarka loo lee yahay ama qabkasta oo looga baahdo in lagu doorto shaqsiyaad ama kooxo shaqo loo bahan yahay iney buuxiyaan.
Waa Maxay Olole doorasho?
Ereyga kale ee maskaxdeena ku soo dhacaa marka aynu doorasho ka hadleyno waa olole doorasho,tani waxay soo shaacbaxdaa marka la sheego in doorashadii bilaabmeyso ama bilaabantayba si dhaqso ah ayaa ururka ama taageerayaashiisu u ololeeyaan sidii loo dooran lahaa dadka sharaxan ee ay doonayaan iney ku soo baxaan doorashada ololahani waa mid la xidhiidha dhinaca siyaasada.Ololahani waa mid lagu soo jiidayo codbixiyayaalka, iyadoo la adeegsanayo xeelado kala duwan oo ay ku jirto xayeysiin iwm.
Haddii aan ku soo dhawaado qormadan aan qorayo doorashada aan hada ka hadlayaa waa tan siyaasada,gaar ahaan waxaa aan diirada saaraya doorashada Somaliland ee fooda inagu soo haysa.
Malahayaga weli umeynu bislaan doorasho ku saleysan ka tarjumida baahiyaheena balse waxaa aynu door bidaynaa doorasho ka turjumeysa in aynu ku xooleyno in yar oo u ooman dhaqaale lagu tanaado oo aan la hubin heerka ay la gaadhidoonto.Sidaa awgeed hadii aynu isweydiino su’aal kale oo ah waa maxay baahida inoo haysa kala doorashada saddexdan musharax ee doorashada soo socota?
Qofkastaaba si buu u arkaa baahidaasi balse anigu waxaa aan aaminsan ahay sidan:
i- Waa lagama maarmaan in aynu helno hogaamiye dalkani yeesho oo bedela hogaamiyaha hada waayo waxaa la gaadhey wakhtigii lagu balamey in sidaa layeelo sida ku cad sharciyada dalka ee doorashada iwm.
ii- Waxaa fursad loo siinayaa dadka ku jira xisbiyada siyaasada ee qaran in ay soo saaraan musharaxooda isaga oo ka soo dhex baxaya doorosho xisbiga gudihiisa ah.
iii- Waxaa loo baahan yahay in qofka xilkaas qabanayaa uu noqdo mid dadka muwaadiyiinta ahi ee codka bixinteeda xaqa u lahi intooda badani doortaan.
iv- Saddex xisbi ee Somaliland waxay xisbi kastaa dhexdiisa ka soo saarey oo soo doortey saddex madaxweyne iyo saddex m-xigeen oo mid waliba xisbi matalayo si uu u qabto hogaaminta dalka sidaa awgeed ayaaynu ugu baahan nahay in aynu inaguna kala doorano musharixiintaasi inaga oo ku kala saareyna sida ay dalka iyo dadkaba u horumarin karaan marka aynu ka eegno, tayadooda hogaamineed,aqoontooda,daacadnimadooda iwm. Qofkastaa wax buu ku kala dooranayaa musharaxiisa. balse …………La soco qaybaha dambe haddii Allah (swt) ogolaado.
← Rohingya “terrorists” and the hierarchies of legitimate resistance in Myanma
WAA MAXAY BAAHIDA INOO HAYSA KALADOORASHO 3 MUSHARAX Q.2? →